Hoe hamahanana olona teny Soamandrakizay: Mompera sy masera sandoka nisoloky mpivaro-bary | NewsMada
Par Taratra sur 14/09/2019
Efa voasambotry ny polisin’ny Sut etsy Tsaralalàna ilay nisandoka ho mompera, sy ireo roalahy niray petsapetsa taminy. Mbola karohina kosa ireo roavavy, nisandoka ho masera. Vary 250 gony, hoe hamahanana ireo mpivahiny teny Soamandrakizay no nosolokian’izy ireo tamin’ny mpamongady vary iray.
Lehilahy mpivarotra vary ambongadiny no nosolokina mompera sy masera roa vavy sandoka, ny zoma 16 aogositra teo. Araka ny fantatra dia nitady vary hovidina hoe hamahanana ireo mpizaika avy any amin’ny faritany izay ho avy eto an-drenivohitra hamonjy ny fahatongavan’ny Papa Fransoa ireto mpisoloky ireto, tamin’io fotoana io ka nanatona ity mpivaro-bary ity. Rehefa nandeha ny fifampiresahana sy ny ady varotra teo amin’ny roa tonta rehetra dia tapaka fa vary miisa 250 gony no halain’ilay voalaza fa mompera, ary mitentina 20.000.000Ar ny vidin’izany. Rehefa raikitra kosa ny ady varotra teo amin’izy ireo dia voalazan’ny loharanom-baovao fa nafatratra tanatina kamio izay nentina masera 02 vavy, ny vary taorian’izay ka nandeha ireto farany. Ny angom-baovao no namantarana fa ny tompon’ny entana kosa dia niaraka tamin’ilay voalaza fa mompera haka ny vidim-bary eny amin’ny faritra Faravohitra. Hagagana anefa ny an’ilay mpivaro-bary fa rehefa niditra tamina toerana iray nolazain’ny mompera fa misy ny lehibeny hangalany ny volam-bary dia nanararaotra nitsaoka ilay mpisoloky. “Nasainy niandry teo am-bavahady aho kay izy nanararaotra nandositra ary tsy hita intsony izay nalehany” hoy ity mpivarotra. Tankina fa sady very vola no very vary ity lehilahy, ka nametraka fitoriana teo anivon’ny polisin’ny SUT Na Sureté Urbaine de Tana ao Tsaralalana. Vao tafapetraka ny fitarainan’ity mpivaro-bary ity teo anivon’ny “Commissariat Central”, ny Asabotsy dia nokarohina avy hatrany ireo mpanao ratsy.
Rehefa natao ny fikarohana an’ireo mpisoloky dia fantatra fa voasambotra teny Analakely ilay mompera sandoka, ny Alakamisy teo ka natao fanadihadiana. Taorian’ny famotorana dia niaiky ny helony izy ary nanondro ihany koa ny mpiray tsikombakomba aminy dia ny lehilahy roa izay mpandray ireo vary halatra ireo. Araka ny loharanom-baovao dia mbola karohina kosa ireo masera roa vavy sandoka izay niara-nanao ny asa ratsy taminy.
Tsy kely lalàna ny ratsy ary tranga matetika hita ny fisolokiana ny hafa amin’ny fahatokisana azy sy ny fitsinjovana ny fiaraha-monina, mandritra ny fivahiniana olo manan-kaja ka manamarika ny tantaram-pirenena iray. Tsy zava-baovao amin’ny toetsain’ny sasany ny fanaovana zavatra toy izao. Indraindray aza dia vita mihitsy ny misalovana asan’olona ho tombontsoan’ny tena ka hamenoana ny paosy. Tsy lasa lavitra akory anefa izany fa ny marina tsy maintsy mipoitra hatrany.